Indawo yokuhlala yasePiran
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sašo
U-Sašo Ungumbungazi ovelele
Konke kumayelana nendawo! Ungakwazi ukugxumela esibonelweni, noma uyihogele ibanga elingu-20m ukusuka egumbini lakho lokushiya… bese ubuyela endlini yakho ethokomele ukuze uthole ukuqabuleka. Indawo entsha, eyakhiwe kabusha ngokucophelela ngaphansi kwe-facade yakudala egunyazwe iziphathimandla zokuvikela amatshe esikhumbuzo.
Ifulethi litholakala esikhungweni somlando esivikelwe sasePiran. Khetha enye yezindawo zokudlela ezihamba phambili eziku-promenade, edlula eduze kwefulethi. Uma ufuna ukudla okulula okusheshayo noma okuthathayo, bona indawo yokudla ebizwa ngokuthi itholakala esikweleni esingokomlando samamitha ambalwa ukusuka efulethini lakho.
Ifulethi linendawo yokuphumula ebuka ulwandle enosofa abathokomele, ilungele izikhathi zokuphumula phambi kwe-TV, ukulalela umculo noma ukufunda incwadi. Uma kunesidingo somuntu owengeziwe, ungakwazi ukuguqula usofa embhedeni. Igumbi lokuhlala lixhunywe nendawo yokudlela yabantu abangu-6 kanye nesihlalo somntwana ozikhethela sona. Eduze kwendawo yokudlela ikhishi. Ikhishi lihlome ngokuphelele:
-Umshini wokuwasha izitsha (amaphilisi okugeza izitsha ayatholakala)
-Izigayo, amapuleti, izinkomishi, izibuko, izitsha zokupheka
Egunjini elihlukile lokugcina i-cooler enkulu elinesiqandisi esihlukene siyatholakala. Ekamelweni lokugcina kukhona indawo yomthwalo wakho. Igumbi lokugezela lifakwe:
Igumbi lokulala lifakwe ama-double bad kanye nosofa ababi. Ekamelweni lokulala kunesikhala esengeziwe sezingubo zakho esitholakalayo.
umbhede oyidabulu engu- 1, 2 imibhede yosofa, 1 usofa
4.83 ·298 okushiwo abanye
4.83 · 298 okushiwo abanye
Ngizotholakala kulo lonke ulwazi ku-e-mail noma kumakhalekhukhwini. Uma kungenzeka ngizokwamukela izivakashi mathupha. Uma kwenzeka lokhu kungenzeki ngaso sonke isikhathi kukhona ozotholakala ezivakashini.
USašo Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Piran namaphethelo